I-Computer Spy Software - Qapha ama-computer we-Windows ne-Mac
Isofthiwe ye-TheOneSpy PC & MAC Monitoring
iyisisombululo esiphezulu sokuqapha intsha, umlingani, nokuhlolisisa kwabasebenzi, bayeke ukucabanga futhi baqale ukuhlola lokho abakhuphule okuthile.
I-TheOneSpy yenza Ukuqapha kwe-PC ne-MAC, yeka ukucabanga futhi uqale ukuhlola lokho okuyizinto ezithile.
Isofthiwe ye-TheOneSpy PC ne-MAC ikunika amandla ekuzihloleni ukuhlola noma yikuphi uhlobo lwe-MAC & Windows computer / Laptops kunoma iyiphi indawo. Isofthiwe ye-TheOneSpy PC ne-MAC inikwe amandla yenza imisebenzi ye-stealth ngaphandle kokuvumela noma iyiphi inkomba yehlombe lakho njengomsebenzi ngamunye kwenzeke kumakhompiyutha we-PC ne-MAC kwi-intanethi enesikhathi esimisiwe sesikhathi.
Izici ze-Monitoring ze-Mac OS
Landelela Indawo Geo yedivayisi yakho
Qapha izinkinobho zokuqalisa
Umlando wokuphequlula, Buka Ngini
Ama-Windows OS Monitoring Features
Thola Imibiko yazo yonke imisebenzi
Qapha yonke imisebenzi eyodwa
Buka Ama-Logs womsebenzi
Screen Shots, Buka Ngini
Uhlelo lokusebenza lokuqapha i-PC ne-MAC, i-True Guardian yezingane zakho 24 / 7:
Ibhokisi elilodwa elinengozi eziningi zezingane ezinjengokuzakhela ihhoko lokuzifunela okuphikelela ngokusesha, izinhlelo ze-PC kanye ne-MAC, ama-color, ama-wallpapers, izinqamuleli ezahlukene, i-icons, i-calculator kanye nokunye le PC ne-MAC encane futhi yizwe elingenalutho ne-pragmatic izinto ezinjengezingane ezisetshenziselwa ukudlala imidlalo usuku lonke nokuxhuma nabangani babo futhi ukuhleba. Okuqukethwe okungokwemvelo okungokwenyama, kubulala ingqondo nomphefumulo, ukuzithoba futhi kushiye umthelela omubi ekukhuleni kwengqondo kwengane. Lezi zinkinga zenza abazali bacabange kabili futhi kathathu ukuqapha imisebenzi ye-PC & MAC yezingane zabo ezincane kanye nentsha. Vele ufake isofthiwe yePC & MAC yokuqapha kudivayisi yakho yengane; uzokwazi ukuvikela izingane zakho ezithandekayo 24 / 7.
Uhlelo lokusebenza lokuqapha i-PC ne-MAC I-Eye Eagle ku-Abasebenzi Bakho:
Abasebenzi abahlali begxile emsebenzini wabo obelwe wona ngenkathi besebenza enhlanganweni njengokudlala imidlalo yamakhadi kwi-PC & MAC, umculo wokulalela futhi kukhona nabasebenzi abathile abavame ukubona izinto ezingavumelekile kubo futhi ngezinye izikhathi zilimaza izinhlelo zekhompyutha . Ngakho-ke, abaqashi bangaziqeda zonke lezi zinkinga ngokusebenzisa isofthiwe ye-PC & MAC spy kumahlelo abo, onegunya lokubhekwa kuzo zonke izinyathelo ezenziwa abasebenzi ngesikhathi sokusebenza. Vele ufake uhlelo lokusebenza lokuqapha i-PC ne-MAC kumadivayisi wakho anenkampani futhi wabhubhisa zonke izinkathazo onakho, njengomqashi.
Ukugxilisa amaphuzu ukufaka uhlelo lokusebenza lwe-MAC & PC Monitoring:
Ukuba ngumsebenzisi udinga ukugxila amanye amaphuzu ukufaka uhlelo lokusebenza lokuqapha le-PC ne-MAC. Izimfuneko zedivayisi ye-PC ne-MAC zifana, thola ukutholakala ngokomzimba kudivayisi yakho, igama lomsebenzisi nephasiwedi kuyadingeka futhi uxhumano lwe-intanethi oluzinzile lokwengamela isikhathi sangempela.
Ekuqaleni, udinga ukuhlola ukuhambisana kuqala. Uhlelo lokusebenza lwe-spy luhambisana newindi le-7, i-8, le-8.1 kanye newindi le-10. Ngemuva kwalokho isheke, inguqulo yewindi, ukuthola ukufinyelela ngokomzimba kudivayisi, cindezela inkinobho yokuqala, cindezela Qalisa ngenkathi iwindi isebenzayo umlingisi bese ucindezela ukungena futhi ekugcineni inguqulo izovela.
Uhlelo lokusebenza lokuqapha i-TOS luhambisana ne-MAC OS Mavericks, i-Yosemite kanye ne-MAC OS Capitan. Manje hlola inguqulo ye-MAC, thola ukufinyelela komzimba kudivayisi, cindezela ku-Apple icon, cindezela "Mayelana nale MAC" futhi uzoba ne-MAC version.